रोमान्चक मोडमा भारत-दक्षिण अफ्रीका टेस्ट, कसले जित्ला ? – WicketNepal
रोमान्चक मोडमा भारत-दक्षिण अफ्रीका टेस्ट, कसले जित्ला ?
Wicket Nepal, २०७४ पुष २४, सोमबार १९:४८
भारत र दक्षिण अफ्रीका बीच केप-टाउनमा जारि टेस्ट सिरिज अन्तर्गत पहिलो टेस्ट रोमान्चक मोडमा पुगेको छ।
पहिलो इनिंगमा ७७ रनको अग्रता लिएर ब्याटिंग गरेको दक्षिण अफ्रीकाले दोश्रो इनिंगमा १३० रनमै सबै विकेट गुमाएपछि टेस्टले रोचकता लिएको हो। घरेलु टिम सस्तोमै समेटीएपछि भारतले टेस्ट जित्न २०८ रनको लक्ष पाएको हो।
लक्ष पछ्याउने क्रममा भारतको खराब ब्याटिंग
२०८ रनको लक्ष पछ्याउने क्रममा यो समाचार तयार पार्दा सम्म भारतले ७६ रनमा ५ विकेट गुमाईसकेको छ।
ओपनर मुरली विजय १३ र शिखर धवन १६ रन बनाएर आउट भएभने त्यसपछि चेतेश्वर पुजाराले ४ रनमा विकेट गुमाए। कप्तान बिराट कोहली पनि २८ रन तथा रोहित शर्मा १० रन बनाउदै आउट भएपछि भारत समस्यामा छ। रिद्दिमान शाह ४ र हार्दिक पान्ड्या ० मा ब्याटिंग गरिरहेका छन्।
डेल स्टेनको अनुपस्थितिमा दक्षिण अफ्रीकाको लागि भेर्नोन फिलान्डरले ३ तथा मोर्ने मोर्केलले २ विकेट हात पारिसकेका छन्।